Markaan imid gabar biyoondo ayaa i qaabishay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Timor Sultan waa 17 jir kelinimo dalka ku yimid sawir: Sawirle Nishtiman.
Markaan imid gabar biyoondo ayaa i qaabishay
Timor: Wanaag un baan Sweden kala kulmay
La daabacay onsdag 30 november 2016 kl 07.00
- Markaan dalka Sweden soo caga dhiganey waxaa na qaabilay gabar biyoondo ah oo na soo dhowaysay. Waa markii ugu horreeysay oo gabar aanan garanayn ay hab i siiso. Ilmo ayaa indhahayga ku soo istaagtay oohinna waan galay
Waxay ahayd sawirkii ugu horreeyay oo uu Timor Sultan ka helo dalka Sweden. Wuxuu ka xasuustaa soo dhowayn wacan. Timor waa wiil dheer oo dhuuban. Timihiisa madow ayaa dhinac u jiifa oo gadaal loo shanleeyay qosol ayuu ku dhuftay inta uu hadlayo. Waa 17 jir, isagoona muddo iminka sannad laga joogo ey isaga iyo dhowr kale oo ey saaxiibo yihiin ka soo baqooleen dalka afgaanistaan una soo socdaaleen qaaradda Yurub. ugu dambeeyntiina uu soo soo gaaray Sweden isagoona soo maray waddammo dhowr ah.
- Sweden wax badan kama aanan aqoon intaanan iman, hase yeeshee dalkani wuu ka duwan yahay waddammo kale oo aan soomaray. Halkan buslshada ku dhaqan waa kuwo naxariis badan, waana midda igu kalliftay inaan ku nagaado.
Maalmo dabadeed kolkii ey magaalada malmö soo gaareen Timor iyo asxaabtiisii ayaa la dejiyey deegaan ku yaala magaalada Göteborg. Tareenkii ey saarnaayeen oo ey ku yimaadeen magaalada Göteborg ayey laba shakhsi kaga hor-yimaadeen halkii ay tareenka kaga soo dageen. Mid ka mid ah wuxuu ahaa Niklas. Timor ayay suurtagal u ahayd inuu shaqaalaha deegaanka la sheekaysto maadaama uu afka ingiriisiga wax ka yaqiinay. Xiriir wanaag-san ayaan dhex-maray isaga iyo Niklas oo uu ammaan ku dareemayay. Timor ayaa ka xumaaday kolkii uu muddo dabadeed Niklas shaqadii ka tagay. Mana aannu filayn inay dib isku arki doonaan. Hase yeeshee xiriirkii ka dhaxeeyay ayaa halkiisii ka sii socday, waaney is arkaan iminka.
Timor ayaa marti ugu jooga aqalka uu Niklas ka deggan yahay magaalada Göteborg. Aad ayey u qosleyaan, weyna is xifaaleeyaan, mararka qaarkoodna si daacad ah ayey u wada hadlaan. Niklas ayaa sheegay in markii ugu horreeysey oo uu Timor iyo saaxiibbadii ey dalka yimaadeen ey ahaayeen kuwo aamu-san oo aan afka kala furin.
Nicklas: Ma xasuusataa inaad aamusneydeen?
Timor: Ha, maadaama aanan dalka cidna ka garaneyn. Dadka haddaanan aqoonna waan ka aamusaa.
Niklas: Xitaa haddii aad i taqaaneen oo aad af-ka ingiriisigana ku hadlaysey. Inkastoo uu is-bedel wayn kugu dhacay sannadkii aad joogtay. Cid walbaad hadda la hadashaa.
- Ma doonaayo inaan ka fekero dhibaatooyinkii i soo maray. Waxaan isku dayaa inaan is ilawsiiyo, xitaa haddii ey mararka qaarkood habeenkii kolka sariirta la tago ay maskaxda ku soo dhacaan, sida uu sheegay Timor.